Sifuna ukuthuthukisa amabhizinisi abansundu emalokishini, imali ihlale khona | News24
Sifuna ukuthuthukisa amabhizinisi abansundu emalokishini, imali ihlale khona
Durban - Abenhlangano iNational Practitioners Association of SA (Nafupa SA) bathi bazowuqinisa umkhankaso wokuvimbela izinkampani zokungcwaba eziphethwe ngabelungu kanye nezamaNdiya ukuba zingangeni emalokishini nasezindaweni zasemakhaya.
Lokhu bakusho esithangamini sabezindaba eMlazi ngoLwesithathu lapho uMuzi Hlengwa omele le nhlangano eyilandulile imibiko yokuthi bazohlasela.
UHlengwa, ongumengameli wale nhlangano, uthe akusikhona ukuthi bayabacwasa abebala kodwa kukhuthazwa abantu abansundu ukuba beseke amabhizinisi endlu yakubo.
"Lokhu sikubiza ngomnotho wasemalokishini. Imali yabantu abamnanya kumele ihlale kubantu abamnyama. Sifuna bazi ukuthi izindawo zabantu abansundu zibekelwe ukuba kuhwebe kuzo abansundu" kusho yena.
OLUNYE UDABA: Azokwenyuka ngo-20% amanani amaqanda ngenxa yomkhuhlane wezinkukhu
UHlengwa uqhuneke wathi: "Asiceli, sazama ukucela, kodwa manje siyanitshela, hlukanani nezindawo zethu."
Ubuye wanxusa abantu abansundu abanemishwalense nezinkampani okungezona ezabantu abamnyama ukuba bayivale.
Lesi senzo sale nhlangano sidonse amehlo kaNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye nezeMvelo uSihle Zikalala othe bazohlangana nale nhlangano ngoLwesihlanu ukuze badingide izingqinamba ababhekana nazo kule mboni, kubika iDaily News.